ukwakheka isicelo Daily kuthatha isikhathi esiningi. Ukuze Ngivuka ekuseni, musa ukusebenzisa umzamo owengeziwe ukuze senze i-futhi sibheke lokhu okukhulu, kuzomele wenze mezhresnichny tattoo iso. Izibuyekezo bathi inqubo kubuhlungu ngempela, kodvwa lisiniketa ticondziso nomphumela omangalisayo, okuyiwona ukukhuthazelela ubunzima besikhashana.
Uyini iso tattoo?
Mezhresnichny tattoo iso (izibuyekezo Iningi labesifazane bathi emehlweni nalo bheka okukhanya bazwakale, futhi ukubhaliswa kwabo ekuseni akudingeki uchithe isikhathi esiningi) uhlobo umbala tattoo, kodwa, ngokungafani yokugcina, lo mbala umbala injected hhayi ezijulile. Ngenxa yalesi ubuchwepheshe kuba i makeup ongenakucimeka wokulingwa futhi kuthathe iminyaka eminingana. Okumibalabala Specialist abakhethiwe ngamunye, esekelwe esikuthandayo amaklayenti.
Amehlo ngemva izinqubo yezimonyo ayabaluleka zibukeke ngaphezulu. Igcizelela ukuma engokwemvelo amehlo, ubuhle babo. Le nqubo zibukeke Uphakamisa amakhona iso eyenza owesifazane ezingaphansi kuka ongaboni. Ngaphambi yezimonyo session master wenza indaba emfushane wokulungiselela ukukhombisa iklayenti, njengoba liyozibonela izimonyo unomphela. Uma lady like yalokho esizayo, bese uya ngqo inqubo.
Izinhlobo tattoo Eye
Makeup unomphela ungenza nezinkophe umqhele ngezindlela ezahlukene, zingabantu:
Tattoo mezhresnichnogo isikhala. Lapha sombala busuka isikhala phakathi nemivimbo engu. Amehlo emva inqubo enjalo bheka zemvelo. Kukhona nomphumela nemivimbo engu uqweqwe iso iba ezijulile futhi ekhululekile. Iningi lolu hlobo makeup abesifazane efanelekayo ezimhlophe abangathandi i makeup nsuku zonke elikhanyayo.
tattoo Mezhresnichny ngamehlo Ukufiphaza (isithombe ukwakheka ungabona ngezansi). inqubo enjalo kuyinto emisha emkhakheni Cosmetology. Lokhu kudala umphumela izithunzi noma feathering ipensela ezithambile yezimonyo. Eye abeke upende lwenkomo olufakwe amanzi, ithoni zazo esicishe okulingana kuya umthunzi samehlo isikhumba. Ubuchwepheshe ukusetshenziswa ukuhluka lokuqala. It is nzima, ngakho-ke, le nqubo kumele eyenziwa master abanolwazi.
Arrows. Akwazi ukushintsha ngokuphelele ukuma iso. Amehlo nalo baba bazwakale futhi nemivimbo engu ukubheka uqweqwe aluhlaza. Imicibisholo ukukwenza kokubili phezulu futhi on the ijwabu leso engezansi. upende Solid sisetshenziswa ngu umugqa okuqhubekayo. Ngokuvamile, abesifazane uncamela imicibisholo imibala emnyama, kodwa ungakhetha eminye imibala. Umumo Bhalobhasha abelethwe ngamunye, sithembele iso ukuma zemvelo.
Yini lokukhetha - mezhresnichny tattoo iso noma imicibisholo? Lo mbuzo okubahlupha kwabesifazane abaningi abaye anquma ukuqaliswa unomphela izinqubo izimonyo. Inketho kuqala ubukeka kwemvelo, kodwa uma ufuna ubudala ungahlala ukupenda ku isixhumi imicibisholo. Indlela yesibili kwenza amehlo okukhanya bazwakale, kodwa ngesikhathi esifanayo, uma umcibisholo unesizungu noma kwenziwe uchwepheshe elingagunyaziwe akakwazi uwasuse njengoba nje ukubhalwa ngeke uthole kude isikhumba. Sizoba ukuhamba Adalberto isikhathi eside ukuthi wenza beautician, ngisho noma ngabe yi akezi ukunambitha.
Zonke nezinkophe imishini tattoo ingahlanganiswa nomunye ukwakha indlela ewumbukwane nobunye. Lapha ungasebenzisa ezihlukahlukene imibala. Kubukeka okufana ethile ethakazelisa ngokukhethekile nge ezahlukene nentaba shades on the ijwabu leso engezansi bese engenhla. Into ebaluleke kakhulu - imibala ehlangana kahle.
Makeup unomphela kuzonciphisa ukusetshenziswa izimonyo esiphansi nokusiza ukudala isithombe esisha ekhululekile.
Izigaba mezhresnichnogo tattoo
Kwenza ukubukeka kungaphezu ebonakalayo futhi ngempumelelo mezhresnichny tattoo iso. Izithombe (Izibuyekezo bathi amehlo ngemva kokuhlinzwa bungasheshi ngokwanele izinsuku ezingu-14) ukuqinisekisa ushintsho ukubukeka kube ngcono ngemva izinqubo ukwakheka eside.
Abanye besifazane bayesaba ubuhlungu, ngakho wenqaba ukwenza inqubo. Ngokusho kochwepheshe, lezi ukwesaba babe ndawo, ngoba ukususa ubuhlungu ngesikhathi ukubhalwa kungenzeka ukuthi usebenzisa umjovo wokubulala izinzwa noma ijeli ekhethekile.
Ukuze umphumela akuthandayo kuphela onguchwepheshe abaqeqeshiwe Kufanele nifeze iso tattoo. Mezhresnichnoe isikhala (izithombe amantombazane abenze le nqubo umxhwele, kodwa ukubukeka kwabo licace okuningi inkulumo ngaphezu kwalokho okuke kwabonwa ngaphambi) ligcwele okuyinhloko onolwazi ngemizuzu embalwa nje. Ngesikhathi inqubo, isakhi sombala Umbala yethulwa akunjalo ezijulile (okungenani 0.5 mm) njengoba tattoo, ngaleyondlela kulondolozwa yi akuyona unomphela, kodwa kuphela iminyaka embalwa.
Ngokungafani nezinye yobudala amasu tatuazha, ukugcwalisa mezhresnichnogo isikhala kwenzeka ngaphandle kokusebenzisa isifanekiso, by ukuma engokwemvelo iso. Ngakho-ke, lokhu ukwakheka ubhekwa engokwemvelo kakhulu, ngokungafani kuya abanye. Le nqubo ihlanganisa:
ingxoxo uchwepheshe zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukusebenza (Ukukhetha umbala sombala ngoba sebethule su, uhlobo ukubhalwa);
test isicelo esizayo tattoo izimonyo;
ukunqunywa sombala esikhaleni phakathi nemivimbo engu;
impatho isikhumba ephulukisa amanxeba kanye magciwane yayo.
Ukuze ugweme umphumela odabukisayo yesikhathi eside ngemva ukwakheka iso kumele athobele zonke izincomo udokotela.
Skin amajwabu amehlo ngemva kokuhlinzwa uyobheka ukuvuvukala obomvu, futhi wenze-up - esikhanya kakhulu. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, imiphumela emibi okuyakuba khona, nokwake emthunzini upende esehlelembe futhi ukuthola ithoni kwesokudla, ziphelelwa ayegcwele. Ngemva kwamasonto amabili, wenze izilungiso tattoo, lapho inkosi elungisa ukukhubazeka wavuma. Uma tattoo kakhulu amehlo dim mezhresnichnoe isikhala (okunye ukubukeza ukunika isaziso sokuthi umphumela kunesithembiso isikhathi eside, cishe iminyaka emithathu) waphinda egcwele sombala ukwenza ukwakheka bazwakale.
ukwakheka ezinjalo ezithusayo yimuphi sezulu. Nge tattoo kungenziwa ukuma iso, cut yabo iba ngcono, ongaboni ukwenza eyelashes mkhulu futhi emuhle.
Ukuze agcwalise isikhala mezhresnichnogo isidingo:
umshini ekhethekile nge izinaliti nezilandiso;
izinaliti alahlwayo namathiphu eziphathelene idivayisi;
iziqukathi okuzokwenziwa ukuxuba imibala.
Zonke izinto inqubo kufanele kube alahlwayo noma disinfected asebenza ngebhethri isibani, azosiza zokugwema izinkinga okungafunwa elihlobene ne ukutheleleka egazini.
Yini odinga ukukwazi ngaphambi inqubo?
Ukuze umcimbi ube yimpumelelo enkulu, futhi imiphumela emibi yaphela ngokushesha, kufanele ukulungiselela ngokucophelela inqubo:
ngelanga kusuka session ubuhle ayikwazi ubuphuza equkethe ethanol;
udinga ukuba ayeke ukudla okubabayo kanye ikhofi oluqinile, njengoba bambulala ngcono kwegazi;
Contact lens akufanele igqoke kokubili phakathi naleyo nqubo futhi emva kokuqedwa kwalo;
ngelanga akufanele uphuze imithi ezithinta igazi ekunqandeni;
It liyadingeka ukuze uyeke ukunwaya eyelashes, ngisho noma kukhona Ukulunywa endaweni;
kungavunyelwe twist nemivimbo engu.
Ukugcina imithetho ngenhla izonikeza ukuguqulwa umbukwane, futhi kuvimbele ukuthuthukiswa ukusabela ezingezinhle.
Kudinga ekhethekile indlela mezhresnichny tattoo iso. Izithombe (libuyekeza abanye besifazane baxwayisa ngokuthi izinqubo kabi ababulawa kungabangela isifo samehlo), okwethulwa kulesi iphepha khombisa umphumela okuyinto eye yafinyelelwa ngokusebenzisa makeup unomphela.
Uyabakhathalela emva inqubo
Ngokuvamile nezinkophe ngemva kokubhala izinqubo ukuphulukisa ezinsukwini ezingu-14. Kabili ngosuku, isikhumba abalimala ziphathwe isinqandakuvunda nesilonda-ukuphulukiswa ejenti. Ngokuvamile udokotela ekunika kubo salon ubuhle. Isiza more osenyameni okusheshayo kuqweqwe ukusheshisa nokuvuselelwa nesineke. Ungasusi uqweqwe ngokwayo, cishe ukulimaza umbala sombala on the ijwabu leso. Ichor kususwe nge swab ukotini afuthwe ngesibulali "chlorhexidine".
Ngemuva kokufaka isicelo unomphela ukwakheka emini ke kungavunyelwe ukumanzisa nezinkophe namehlo. Futhi ngeviki yokuqala ngemva tattoo is hhayi Kunconywa ukusebenzisa izimonyo nemihlobiso, wafike wahlanganyela isiko ngokomzimba okukhulu. Kwaphela izinsuku ezine, nokuningi kufanele ayifakiwe zonke umcimbi umusi, lapha kusebenza ukugeza.
ukulungiswa Eminye Kwenziwa njengoba kudingekile, ngoba ngezinye izikhathi kukhona ukulahleka olungaphelele umbala kwesikhumba ukuphulukiswa. Century kunesithembiso tattoo kusuka ezahlukene zonke, kusuka 1 kuya eminyakeni emi-5.
Mezhresnichny tattoo amehlo: ngaphambi nangemva izithombe, isithunzi
Isicelo unomphela ukwakheka ku Isivalo kunezinzuzo elingenakuphikwa. Phakathi kwabo:
saving time makeup;
iso ekhululekile futhi kahle contoured ngaphandle ezihlotshaniswa nokusetshenziswa kwezimonyo zokuhlobisa;
Imiphumela ehlala njalo - kwezinye izimo, umphumela mezhresnichnogo tattoo abekelwe iminyaka 5;
It kugcizelela emihle nemibi yefomu likuvumela ukuthi ususe iso;
ukusetshenziswa sakugcina izimonyo;
Ukumelana sezulu izimonyo, amanzi anjalo;
ekusebenziseni odayi hypoallergenic;
okwandisa kwabantu okubonakalayo eyelashes;
bushintshe esikhathini ukubukeka kwayo yonke indawo abesifazane zibe ngcono.
Konke lokhu kuqokomisa mezhresnichny tattoo iso (isithombe abesifazane khombisa yezinzuzo zale nqubo), phakathi kwezinye amasu asetshenziswa salon ukuthuthukisa ukubukeka kwangaphandle. Into ebaluleke kakhulu lapha - ukukhetha izinqubo lukachwepheshe ofanelekayo.
Okumbi mezhresnichnogo tattoo
Njenganoma yimuphi inqubo yezimonyo, mezhresnichny tattoo ekhulwini has ngebuhle nebubi. Okokuqala, lokhu okuyinto ebuhlungu, owesifazane ngamunye ithwele ukungakhululeki ngezindlela ezihlukahlukene, kuye ngezi- ngabanye ukuzwela embundwini. Ukungakhululeki lugcinwa ngisho nalapho esebenzisa imithi ebulala izinzwa. Kungaba sebuhlungwini obunzima, omaphakathi futhi okuncane noma okuncane ukuluma.
Umbala we ebusweni isikhumba kungase hlanhlatha kancane eyelashes. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuba sifeze inqubo ukuvuselelwa kanye izinwele eqinisa. Kule ukwakheka akakwazi kube lula kangaka ukuba balahle, ngisho noma ekhathele. Futhi emva nezinkophe tatuzha babe ukuvuvukala ogcwele ukuchitheka. ekusimameni ingathatha izinsuku ezingu-7 kuya kwezingu-14.
Ngaphezu kwalokho, uma kuqhathaniswa high izindleko mezhresnichny tattoo iso. Umthelela wale nqubo kungaba Kuyadumaza uma umninindlu alihambisani inhlanzeko yayo ubambe. Kulokhu, kunethuba ukutheleleka egazini kanye nokwenzeka ezihlukahlukene izifo iso.
Kusho tattoo mezhresnichny iso angabona kanjani izithombe kule athikili. Abesifazane makeup ngokucace nakakhulu futhi umbukwane. Kodwa, naphezu kwalokhu, hhayi wonke umuntu angakwazi ukwenza lolu hlobo inqubo. Ngakho, unomphela iso makeup akakubangeli sikashukela, phakathi nokukhulelwa kanye lactation. Inqubo is contraindicated in iziguli izilonda zesikhumba, ukuya esikhathini. Ban ubambelele kweseshini zingakhiqiza kwesibindi, isifo i-HIV, isifo sokuwa. Akunakwenzeka ukuba sifeze inqubo esikhumbeni ukuthi uthambekela nezibazi, nabantu abampofu igazi ekunqandeni. Kufanele ukulahla umcimbi yezimonyo esikhathini yokugula ekhulile kanye exacerbation isifo esingamahlalakhona. Musa ukwenza inqubo izifo esweni nezinkophe.
Zonke izifo zabo kufanele azise inkosi kusengaphambili, ukuze ugweme imiphumela emibi ngemva izinqubo yezimonyo.
It has a izindleko kuqhathaniswa eliphezulu unomphela makeup amehlo. Mezhresnichnoe isikhala (izithombe, ukubuyekezwa uqinisekise kusebenta le nqubo, ngoba owesifazane ngemuva kwakhe babe ngokucace nakakhulu futhi enhle, aqede ukukhubazeka ebonakalayo iso umumo) amakhosi abanolwazi enkulu egcwele kwamaminithi ambalwa, futhi eyodwa yesimiso enjalo kuyodingeka bakhokhe kusuka 3 kuya kwezingu-9. Ladies belulekwa ukuba ugcine, ngoba inqubo onguchwepheshe abangenamakhono ngentengo ephansi ezingenza abe nemiphumela edabukisayo kakhulu.
Mezhresnichny tattoo iso: Izibuyekezo
Mezhresnichny tattoo ekhulwini has izibuyekezo okuxubile kakhulu. Ezinye izintokazi ujabulile umphumela. Kuthiwa kolwandle naphezu kolwandle babebonakala kuye okungcono. lamehlo akhe ema "yakhiwa" ngaso sonke isikhathi, futhi akudingeki ukuba basebenzise umzamo othe xaxa. Pretty izintokazi tattoo leminyaka ekuphileni kwansuku zonke. Bona wazi ukuthi amehlo bheka ibala, amahle ekhululekile njalo. Laba besifazane siba sincane isikhathi ukuchitha makeup. Lesi sigaba yezakhamuzi uthi ngesikhathi sale nqubo, abazi ubuhlungu, kodwa umphumela iyagcinwa isikhathi eside (kuze kufike eminyakeni 5) futhi kuye kwanyatheliswa abakulindele.
Mezhresnichny tattoo iso has Izibuyekezo nemibi. Zikukhombisa zibiza kakhulu kunemidanti ngokwanele eside isikhathi yokuthola (amasonto amabili), ukuvuvukala kanye ububomvu at ngosuku olulandelayo ngemva kweseshini. Kuthiwa lo mcimbi ukwenza kangcono ngempelasonto, lapho akudingekile ukuya emsebenzini. Abanye abesifazane ubuhlungu phakathi nesimiso, itjheje Kungasebenti kahle kwaletinye wizadi, ngawo kwakudingeka bahambe ngempela isikhathi eside. Ezinye ukunikeza unomphela ukwakheka akuhlalanga inyanga.
Ngokungangabazeki, le nqubo akuyona emnandi, kodwa umphumela uba ngezinye izikhathi idlula wonke amathemba. Uma tattoo yobudala mezhresnichnogo isikhala wawenziwa ngendlela efanele, umphumela abesifazane basutha futhi akukho imiphumela emibi le nqubo akuzange kumenze.
Izitsha Fall Ball: ilula futhi kulula